पढ्ने समय:4मिनेट(Last Updated On: 19/06/2020)
वास्तबमा, लगभग युरोप मा सबै कफी संस्कृति र पश्चिमा इटाली आउँछ. किन सबै कफी विभिन्न मानक प्रकार हामी पिउन छ यो छ इटालियन नाम.
इटाली मा मिलान रेल स्टेशन यो क्याफे सही यसको नाम वर्णन गरिएको छ देखि केही मिनेट 'चल्छ स्थित. यो आरामदायक क्याफे वरिपरि हिँड्ने तपाईं खान हुँदासम्म बिरालोहरु र पेय हो. यो फंकी क्याफे बिरालाको आकारको मगमा उत्कृष्ट चिया दिएको र स्वादिष्ट केकको लागि कुख्यात छ. कर्मचारीहरु सुपर अनुकूल छन् र बिरालोहरु को सबै भन्दा सधैं सुतिरहेको छन्, यो तिनीहरूले गर्न चाहनुहुन्छ के छ.
तपाईं इटालियन कफी बारेमा यति ठूलो छ के हेर्न देख रहे भने, यो भ्रमण गर्न स्थान हो. coffees र स्वादिष्ट घर नाश्ता को विस्तृत श्रृंखला यो पर्यटकहरु र स्थानीय दुवै लागि एक लोकप्रिय कफी स्थान बनाउन. यो नाश्ता गर्न ठूलो ठाउँ छ र एक वा कम यूरो लागि केही coffees बेच्छ. यो कफी पसल छ व्हीलचेयर पहुँच, वाईफाई छ, छ पाल्तु जनावर-मैत्री र राम्ररी टन्न भरेर रक्सी पट्टी थियो. स्टेशन बाट सात मिनेट पैदल.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://embed.ly/code?URL = https://www.saveatrain.com/blog/coffee-shops-train-stations-in-italy/ - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#कफी मिलान रेल स्टेशन travelrome